Apple ichagadzirisa matambudziko ebhatiri eApple Watch Series 2 yemahara | Ndinobva mac
Apple ichagadzirisa Apple Watch Series 2 matambudziko emabhatiri emahara
Mumavhiki apfuura, vazhinji ndivo vashandisi vane yavo Apple Watch Series 2, 42 mm, vanozviti izvo iyo Apple Watch yatanga kumira kushanda husiku kana kuti yako yekupedzisira skrini yatanga kubvisa. Dambudziko rakakonzerwa, sezvataigona kufungidzira, kune bhatiri rechishandiso.
Kunyangwe mune dzimwe nguva, iyo terminal inomira kupindura uye kurodha zvakakwana, mune zvimwe zviitiko, lBhatiri rinozvimba uye iyo yekupedzisira skrini inotanga kusimuka. MuEuropean Union, isu hatina dambudziko nenyaya yevimbiso sezvo ino terminal ine isingasviki makore maviri pamusika, asi kune dzimwe nyika, senge United States, uko garandi iri gore rimwe chete kana izvozvo zvingave dambudziko.
Uye ini ndinoti zvinogona kuva dambudziko, nekuti nguva ino, vakomana veCupertino vatora nguva pfupi kuti vaone dambudziko iri, uye vazivisa kuti vanozove nebasa rekugadzirisa zvese zviteshi zvinokanganiswa nedambudziko iri mahara zvachose, dambudziko rinongobata mamilimita makumi mana nemaviri, zvisinei nemuenzaniso, ingave Sport, iyo simbi modhi kana iyo Hermes.
Kana yako Apple Watch yatanga kuratidza malfunctions erudzi urwu, usazeza kushanyira Apple Store kugadzirisa dambudziko iri, dambudziko rinogona kunge rakagadziriswa nekushandura zvachose iyo terminal, nekuti hazvisi zvitoro zvese zvine maturusi akakodzera kuti vakwanise kuisa maoko paApple Watch.
Kuti udzivise matambudziko emangwana nevashandisi, Apple inoti mune gwaro remukati, izvo iyo waranti yeiyi chaiyo modhi inowedzerwa kusvika pamakore matatu, kuitira kuti vashandisi venguva yemberi vakatenga iyi terminal isati yabviswa pamusika nekuvhurwa kweChitsauko 3, vasakuvadzwe nedambudziko iri, rinogona kana kusakanganisa matominal avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple ichagadzirisa Apple Watch Series 2 matambudziko emabhatiri emahara
Iko mukana wechitatu-bato dials paApple Watch inoratidzwa mune watchOS 4.3.1
Wedzera mitambo mitsva kuApple Watch Workout app